Lwesibili 24 Meyi 2022
I-Ice Mold Imvelo bekulokhu kungomunye wemithombo ebaluleke kakhulu yokuphefumlelwa kwabaqambi. Umqondo ufike ezingqondweni zabaklami ngokubheka esikhaleni kanye nesithombe se-Milk Way Galaxy.Isici esibaluleke kakhulu kulo mklamo ukwakha ifomu elihlukile. Imiklamo eminingi esezimakethe igxile ekwenzeni iqhwa elicace bha kodwa kulokhu kuklanywa kwethulwa, abaklami bagxila ngamabomu amafomu enziwa amaminerali ngenkathi amanzi ephenduka iqhwa, ukuze kucace ngokwengeziwe ukuthi abaklami baguqula isici semvelo kube nomphumela omuhle. Lo mklamo wenza ifomu eliyindilinga eliyindilinga.
Msombuluko 23 Meyi 2022
Ukuguqulwa Kokupaka Ibhayisekili
Ukuguqulwa Kokupaka Ibhayisekili ISmartstadors-Cyclepark iyindawo yokushayela amabhayisekili ahlukahlukene futhi ahambisanayo emaminithini amancane okwenza kube lula ukuthuthuka kwezindawo zokupaka amabhayisekili ezindaweni zasemadolobheni ngaphandle kokufaka imfuhlumfuhlu endaweni yomgwaqo. Okokusebenza kusiza ukunciphisa ukwebiwa kwebhayisekili futhi kungafakwa emigwaqweni emincane kakhulu, kudedela inani elisha kusuka kungqalasizinda ekhona. Kwenziwe ngensimbi engenasisekelo imishini ingafakwa umbala we-RAL bese ifakwa uphawu kwaziphathimandla zasekhaya noma abaxhasi. Ingase futhi isetshenziselwe ukusiza ekuboneni imizila yeCycle. Ingakhiwa kabusha ukuze ilingane nanoma yisiphi isayizi noma isitayela sekholamu.
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Izicathulo Zokunethezeka Lwesihlanu 24 Juni
HandiShred Iphepha I-Shredder Lwesine 23 Juni
Gamsei I-Cocktail Bar Lwesithathu 22 Juni
Isiphuzo I-Ice Mold Isihlungi Sikagwayi Ukuguqulwa Kokupaka Ibhayisekili Ukufakwa Kwe-Magnesium Ibhodlela Lewayini